5 सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकमा पेरिस हेर्नुहोस् | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकमा पेरिस हेर्नुहोस्
त्यहाँ पेरिस बारेमा प्रेम गर्न धेरै छ. जहाँ तपाईं पनि सुरु गर्छन्, दायाँ? मनमा आउने पहिलो कुरा एफिल टावर र Louvre जस्तै ठूलो साइटहरु छ. तर किन पनि पत्ता लगाउन छैन लुकेका रत्न शहरमा? हामीलाई सुरु गरौँ5पेरिस हेर्नुहोस् सबैभन्दा प्रसिद्ध स्ट्रिटहरू!
रेल परिवहन छ सबैभन्दा पर्यावरण मैत्री मार्ग यात्रा र यो किन औं छलेख ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र सुरक्षित एक ट्रेन द्वारा गरिएको थियो, सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट विश्व मा.
1. सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकमा पेरिस हेर्नुहोस्: बाटो विक्टर ह्यूगो
बाटो विक्टर ह्यूगो पेरिस को 16 औं arrondissement मा एक बाटो हो. मा सुरु चार्ल्स डे Gaulle (पनि Etoile रूपमा ज्ञात) र Tattegrain मा समाप्त (बन्ने बाटो हेनरी मार्टिन). यो बाह्र पक्षको को एक Etoile मा सुरु गरिएको छ, र दोस्रो बाह्र को सबैभन्दा लामो, को बाटो को Champs Elysees पछि.
प्रसिद्ध विक्टर ह्यूगो पछि नाम, होटल Particulier मा आफ्नो अन्तिम दिन गर्ने खर्च. ह्यूगो एक मुर्ति बाटो हेनरी मार्टिन संग चौराहे मा पाउन सकिन्छ. बाटो विक्टर ह्यूगो यसको अविश्वसनीय लागि प्रसिद्ध छ सुन्दर वास्तुकला जो एक आकस्मिक टहलने र एक लागि पूर्ण छ ठूलो इन्स्टाग्राम तस्वीर! को ग्राम लागि यो गर्न!
2. बाटो Montaigne
ओपेरा को प्रशंसक? त्यसपछि पेरिस यो प्रसिद्ध सडक लागि छ! यो सडक पनि थिएटर को Champs Elysees घर छ. ओपेरा दुई भव्य orchestras को घर हो. तपाईं एक सानो अतिरिक्त समय छ भने, हामी पक्कै यो ऐतिहासिक प्रदर्शन स्थल एउटा यात्रा तिर्ने सिफारिस. यसबाहेक, यो बाटो पनि आफ्नो महत्त्व लागि सम्मान गरिन्छ फेसन उद्योग. धेरै प्रसिद्ध ब्रान्डहरु Vuitton सहित यहाँ पाउन सकिन्छ, LOEWE, Celine र थप.
3. सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकमा पेरिस हेर्नुहोस्: Rue De Rivoli
पेरिस को स्मरणमा प्राप्त गर्न तयार? त्यसपछि यो सडक को आफ्नो सूची मा हुनु आवश्यक छ5पेरिस सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकमा! यो अत्यधिक आबादी, ऊर्जावान सडक पेरिस को बीचमा मार्फत चल्छ, नदी Seine गर्न समानान्तर. Rivoli को युद्धमा मा नेपोलियन प्रारम्भिक संग्रामहरू जीतेको पछि नाम, यो सुन्दर Boulevard को Louvre र Tuileries बगैचा घर छ. शाही महल, बस Louvre अर्को, हो सिद्ध स्थान को sunlit उद्यान मा एक दिन बाहिर रमाइलो गर्न. तपाईं पेरिस को पुरानो भव्य पक्ष एक झलक फसाउन चाहनुहुन्छ भने यो सही सडक छ. यो नछुटाउ!
4. ढाकिएको पदहरू
मेला मार्फत पेरिस मुख्य बहुमत हावी कि विशाल boulevards देखि एक संक्षिप्त प्रस्थान लिइरहेको, यो पदहरू Couverts अझ आरामदायक विकल्प हो. यी ढाकिएको किनमेल alleys शहर मार्फत प्रचण्ड सर्टकटहरू लागि बनाउन. तपाईं विचित्र क्याफे पाउन सक्नुहुन्छ, पबहरूमा, र किफायती किनमेल. त्यो मात्र होइन, तर यी ढाकिएको alleys मा वास्तुकला बिल्कुल भव्य छ त तिनीहरूलाई सम्झना छैन!
5. सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकमा पेरिस हेर्नुहोस्: Boulevard डी Clichy
Montmartre एक बिन्दुमा पेरिस कलात्मक भीड लागि उद्यानलाई मानिन्छ थियो. दुर्भाग्यवश, पर्यटन फलस्वरूप उच्च मूल्य फरक छिमेक मा कलाकारहरूको भन्दा संचालित छन्. त्यहाँ तपाईं Moulin रूज र पेरिस घर छ जो Boulevard डी Clichy प्रकाश जिल्ला रातो पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं नाइटलाइफ र राम्रो समय कुनै पु पाउनुहुनेछदिन को के समय तपाईं यात्रा गर्न छनौट atter. एक क्याबरेट प्रदर्शन हेर्दै को Moulin रूज गएर विचार!
पैदल जूता को आफ्नो मनपर्ने जोडी धारण, र हेर्न पेरिस प्राप्त5पेरिस सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकमा! एक सवारी आवश्यक? तपाईं कहिल्यै सोध्न हुनेछ लाग्यो! एक टिकट लो एक ट्रेन सेव, अब. You can book in seconds with no extra or hidden fees.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकमा पेरिस हेर्नुहोस्” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/famous-streets-paris/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#beautifulstreets europetravel longtrainjourneys trainjourney रेल सुझावहरू travelfrance travelparis